Orchid Dracula Nlekọta, ịkụ, na ịmụpụta. Umu anumanu. Ifuru Foto - Osisi - 2020
Dracula - Elechid mara mma dị egwu
Dracula (Dracula) - mkpụrụ osisi nke Epiphytic sitere na ezinụlọ Orchidaceae (Orchidaceae) a na-ahụkarị n'oké ọhịa nke Central na South America. Mkpụrụ ndụ ihe nketa nwere ụdị 123.
Ọtụtụ ụdị dracula na-eto dị ka ifuru ahihia ma ọ bụ ahịhịa n'ime ụlọ.
Nsụgharị aha sayensịdracula - "nwa nke dragọn", "obere dragọn", "dragọn". A kọwara aha a site na udi nke ifuru, yiri ihu nke obere dragon.
Egosiputa umu anumanu n’aha otutu umu ihe ndi a na aha otutu ndi mmuo, ndi ojoo ojoo ya na ndi a bu Dra Dracula (chimaera, diabola, fafnir, gorgona, gorgonella, nosferatu, polyphemus, vampira, vlad-tepes).
N’edemede asụsụ Russia banyere ire ure, a na-ewere okwu "dracula" nke pụtara "aha ụdị mkpụrụ osisi" dịka nwanyị site na aha sayensị (Latin); ọmụmaatụ maka aha sayensịDracula bella Enyere aha Russia "Mara mma Dracula".
Akara okwu banyere aha ndi n’etu ahihia na ndi amateurDrac.
Dracula bella. Ihe atụ sitere na osisi si na Florence Woolward: Genus Masdevallia. 1896
N'ime ụdị 123 ndị agụnyere ugbu a na ụdị mkpụrụ ndụ Dracula, ebu ụzọ kọwaa ụdị ahụMasdevallia chimaera (ugbu a -Dracula chimaera): Heinrich Gustav Reichenbach (1823-1889) mere nke a sitere na osisi achọtara na Mach 1870 na Western Cordillera site n'aka onye orchid na-achịkọta Benedict Roel. Osisi a kụrụ ihe atụ banyere nerds nke na ha ji ifuru ya na-adịghị ahụkebe, ọ bụghị naanị na akụkọ ifo Chimera, kamakwa na ọrụ egwu Beethoven na Chopin. Chimera na - ejikọta anụmanụ atọ: ọ bụ anụ mmiri nwere isi atọ nke na - eji isi ọdụm, nke ewu na dragọn na - egbu egbu n'olu olu mmadụ, na - atụgharị na ọdụdụ ọdụ ya. Ọ bụ ugboro atọ a nyere G. Reichenbach ohere iji nye ihe onyonyo nke Chimera n'aha osisi. Ihe mmeghe nke ọdịdị nke ifuru ahụ bụ nke atọ togoro nke ọma, kpuchitere ya shaggy, outgrowths nke sepals, petals anya nwere agba dị obere na akwa dị ka agba agba agba nke agba nke agba agba agba. Onye buru ụzọ hụ osisi a na-adịghị ahụkebe na 1875, V.G.Smith dere n'ụzọ nkịtị na: "Ọ dịghị onye, ​​nke hụrụbu ifuru nke masdevallia nke Chimera, nke na-agaghị enwe ọ aụ obi ụtọ na ihe ịtụnanya tupu mma ime, ihe na-adịghị mma na nke a na-acha odo odo. Kechie ya anya dị ka ọdụ agwọ nke Chimera dị egwu, na ọtụtụ ntutu ndị na-ekpuchi ha na-eguzo na njedebe na ọnụ ya dị egwu, na-enwu ọkụ. "Masdevallia Chimera dị ka ụfọdụ ụda, isi, agba sitere na abụ olu ụtọ, ihe dị egwu ma ọ bụ ọmarịcha osisi mara mma." ObiọmaDracula kewapụrụ ya site na ụdị nke Masdevallia (Masdevallia) na 1978.
Na ibe akwụkwọ nke Greener Chronicle, Heinrich Reichenbach dere, "... ọ bụ oge echefu echefu na ndụ m orchid, mgbe mbụ m hụrụ ifuru a ... enweghị m atụkwasị anya m? Enwere m nrọ? Enwere m obi ụtọ n'ihi na ọ bụ nnukwu ngọzi m hụrụ ọ bụ ọrụ ebube zoro naanị otu puku afọ. Agaghị m ekwenye na ụdị ihe a site na nkọwa dị mfe. Ya mere, akpọrọ m ya chimera. "
Dabere na akụkọ ifo, ọ bụ naanị onye na-echekwa Pegasus nwere nku nwere nku nke amụrụ site na ozu nke gorgon Medusa nke Perseus meriri nwere ike merie Chimera ihu atọ. Dike a tụgharịrị bụrụ nwa nwa nke Sisyphus Bellerophon. A na-ekenye aha ya, n'aka nke draculas, nke a bụ Dracula Bellerophon (D. bellerophon Luer & Escobar), nke a chọpụtara na mpaghara ọdịda anyanwụ nke Coordbian Cordillera na 1978. Ọdịdị ahụ yiri Dracula Chimera, mana ifuru ya bụ agba aja aja na agba, kpuchie ya na okpo odo.
Akụkụ ala ugwu nke ụdị sitere na Parasu bụ Southern Mexico, ókèala ndịda nke ụdị nkesa bụ Peru.
Na Mexico, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama na Peru, naanị ụdị anụ ụfọdụ ka a hụrụ, ebe a na-ahụ ụdị ụdị dị iche iche dị na Colombia na Ekwedọọ. Otutu oge, nkpuru nkpuru n’otu n’o nwere oke nkesa nke pere aka, ana achota, dika ima atu, na ndagwurugwu.
Dracula toro na ịdị elu nke otu na ọkara ruo abụọ na ọkara na ọkara nke oke osimiri n'okporo ụzọ dị n'oké ọhịa nke Cordillera - nke na-abụkarị n'osisi nke nnukwu osisi, adịghị elu karịa mita atọ site na ala, na mgbe ụfọdụ na ala. Ha anabataghị mgbanwe nke ọnọdụ ịdị adị: ọ bụrụ na osisi nke osisi ahụ dị n'elu osisi ahụ dara n'ihi ebumpụta ụwa ma ọ bụ gbutuo, orchid ga-anwụ ngwa ngwa.
Ejiri onodu udu na ala nke draculas tolitere dika okpomoku di elu, udu mmiri mgbe nile, oku di ala na ala di ala.
Dracula polyphemus, ihe ifuru: ahuru ahiri n’okpuru - ahihia fused; echichiri na-acha odo odo na veins - egbugbere ọnụ (gbanwere petal); nku abuo di n’elu - petals abuo ozo; ihe a na-eme n’etiti ha bụ kọlụm (androeals, fused with gynoecium)
Ndị nnọchianya nke mkpụrụ ndụ ihe nketa ndị a dị obere ahịhịa nwere ahịhịa dị mkpụmkpụ na mkpịsị akwụkwọ toro ogologo.
Ọkpụkpụ rhizome dị mkpụmkpụ.
Pseudobulbs dị na orchids sitere na ụdị mkpụrụ ndụ Dracula, n'adịghị ka ọtụtụ ndị nnọchianya nke Epidendrova subfamily (Epidendroideae) anaghị anọ. Akwụkwọ ahụ nwere ike ịnwe ogwe, ma ọ bụrụ na ha emezuchaa ọrụ pseudobulbs dị na ya. Agba nke akwụkwọ ndụ bụ site na ìhè gaa na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Okooko osisi zygomorphic na-ama nke ọma; n'ụdị dị iche iche ha dị iche n'ụdị na agba, mana ihe a na-ahụkarị maka ya bụ na a na-ejikọ ili atọ ahụ na ntọala n'ụzọ ga-etolite nnukwu efere, ebe isi (outgrowths) nke sepals ahụ na-adịkwa anya. A na-ekpuchikarị ntutu ndị a.
Insectsmụ ahụhụ nwere ike ịmịcha Dracula, yana ụsụ na ahịhịa.
Peduncles n'ihe ka ọtụtụ n'ụdị nwere otu ọrịre, kwụ ọtọ ma ọ bụ dịtụ ntakịrị, n'ụdị ụfọdụ, a na-eleda ha ala, na-abanye na mgbọrọgwụ ikuku.
Mkpụrụ dị obere, dị ọtụtụ, fusiform.
Dracula bụ griin haus a ma ama na Europe na ngwụsị narị afọ nke iri na itoolu. Uwe ha, ụdị Gothic na ọdịbendị ha siri ike mere ka osisi ndị a bụrụ ihe bara uru na nke bara uru.
A kụrụ ihe ọkụkụ ndị a, ma ha agaghị eto n'ime ihu igwe dị iche na ihu igwe nke ebe obibi. Ọnọdụ na-adịghị mma na-eduga n'ọkụ ntụ, na-asachapụ na ndụmọdụ nke akwụkwọ na mbibi ọdịda nke okooko osisi. Ulo griin a gha ezigbo oyi, a gha enye ya ndi nwere otutu egwu ma ndi ulo oku; Okpomoku kacha ubochi karia karia 25 Celsius.
Ìhè: ndo, nke dị n'okpuru.
A na-akụ ahịhịa dị mma na nkata ma ọ bụ ite plastik maka ahịhịa mmiri. Enwere ike idobe arịa ndị ahụ na akwa sphagnum ma jupụta fiber Mexicoifern, wee kpuchie nnukwu sphagnum dị ndụ n'elu. Iji mee ka akpaetu dị mma, ọ dị mkpa iji naanị mmiri mmiri maka ịgba mmiri. Enwere ike iji obere osisi moss kpuchie ya na ahịhịa na - eto eto. Ọtụtụ ndị na-anakọta ego na-eji sphagnum New Zealand akpọnwụ akpọnwụ.
Onu ogugu ndi ozo di otutu kariri 15 Celsius. N’ọnwa ndị ahụ na-ekpo ọkụ karị, okpomọkụ ekwesịghị ịrị elu karịa 25 Celsius.
Ikwu iru mmiri bụ 70-90%.
Ekewa ekera n’ime ụzọ subgenus atọ:
Dracula subg.Sodiroa - monotypic subgenus nwere otu ụdịDracula sodiroi;
Dracula subg.Xenosia - monotypic subgenus nwere otu ụdịDracula xenos;
Dracula subg.Dracula - subgenus, nke na - agunye ụdị umu ihe ndi ozo.
Adọ ụdị ụfọdụ
A maara ngwakọ mmekọrịta chiri anya nke ụdị mkpụrụ ndụ Dracula. Offọdụ n'ime ha:
Dracula × anicula = Dracula cutis-bufonis × Dracula wallisii;
Draịvu × radiosyndactyla = Dracula radiosa × Dracula syndactyla.
A na-ahụ ụdị ngwakọ abụọ a na Colombia.
E nwere ọtụtụ ngwakọ n'etiti ụdị nke Dracula na Masdevallia. A na-ejikọ ụdị ngwakọ ndị a na ngwakọta ngwakọ Draculwallia:
Ọrịa na ahụhụ:
Udiri osisi nke sitere na orchid ezinụlọ gụnyere ihe karịrị ụdị 32 nke nwere klaasị 4 na iwu 7. A makwaara karịa ihe dị ka usoro 90, nje na nje na-akpata ọrịa orchid: ntụpọ ahịhịa, ire ere, mkpụrụ osisi na-eto eto, tuberidia, akwụkwọ ya na ifuru.
Ọtụtụ mgbe ndị a bụ: nsị ahịhịa, aphids, thrips, scutes, wdg. N'ime ọrịa ndị ahụ: nwa, mgbọrọgwụ, agba aja aja, fusarium, isi awọ, anthracnose, wdg.
Dracula mara mma, ma ọ bụ mara mma (Dracula bella) Dracula chimera (Dracula chimaera) Onye mbụ botanist L. Linden butere ya osisi na Europe na 1872 wee bụrụ ihe ịchọ mma maka mkpokọta orchid n'ubi botanical. Dracula psittacina
Osisi nkwụ na-eto nwayọ…
N'oge oyi na udu mmiri dị mma!
"Ndị isi" - ọkọlọtọ ndị dị na elu nke ose
Fatsia - Mma Mma Asia
Moths na-acha anụnụ anụnụ na greenery nke Uganda clerodendrum na-adọta uche nke ndị na-elekọta ubi
Kọ na ilekọta lavender n’ime ite n’ụlọ
Flight nke culinary pụrụ iche - anụ zrazy
Kedụ nlekọta ọ dị mkpa maka petunias n'oge oyi na ụlọ okpomọkụ ??
Garlic shooter tapawa maka oge oyi
Ojiji nke greepu mmanya maka culinary na ebumnuche ogwu
Kacha mma iche tii ngwakọ Roses
Copyright 2020 \_ Ndinuak Osisi \_ Dracula - Elechid mara mma dị egwu